Polyester Sunscreen Mucheka Vagadziri & Vatengesi - China Polyester Sunscreen Fabric Factory
Solar Screen Roller Shade 30 Polyester 70 PVC Sunscreen Blind Machira
Izvo zvakanakira roller roller
(1) Ruzha uye kudzikisira ruzha
Rudzi rutsva rwezvivharo zve roller hazvishande chete pasina ruzha pachavo, kana mhuri iri munzira ine ruzha, nhandare yendege, nezvimwe, kumisikidza ma roller roller anogona kudzora zvakanyanya kukanganiswa kweruzha rwekunze uye vanhu vanogona kunakidzwa nehupenyu hwakanyarara uye nharaunda yekudzidza .
Gadzira Sunscreen Mucheka Kubva China Blinds Fekitori Sheer Elegance Sunscreen Blind
Sekutaura kunoita vanhu, vanhu vanogara vachifara kana vachifara. Mushure mezvose, vakashanda nesimba kwenguva yakareba, uye pakupedzisira vaine dendere ravo, saka vanogara vachifanira kuita basa rakanaka rekushongedza. Asi mashandisiro ekushongedza kwedzimba nyowani? Kune vanhu vatsva vasina ruzivo, kana vasingazive zvakawandisa, vanozotambura nekurasikirwa. Nhasi, isu tichataura nezve maitiro ekusarudza machira ekushongedza edzimba nyowani.
Australia Polyester Uye Vinyl PVC Polyester Sunscreen Mucheka WeRoller Bofu
Ndeapi mapofu anogona kusangana nevanhu vazhinji zvinodiwa?
Kudzora mwenje ndicho chinhu chekutanga chinoshanda kune vazhinji vashandisi kusarudza zvigadzirwa zvekuchengetedza zuva. Sefa kana kuvhara kwezuva zvinoenderana nezvinodiwa munzvimbo dzakasiyana.
Yakasungirirwa-mumvuri zvigadzirwa zvinogona kudzora kushandiswa kwesimba nekuti vashandisi havavimbe nemhepo kutonhodza kana kudziyisa kudzora kudziya kwemukamuri. Munguva yechando, kupisa mari kunogona kuchengetedzwa kusvika pa49%. Muzhizha, kusvika pamakumi matanhatu muzana emari yefriji inogona kuchengetwa.
China Roller Shades Yakapedzwa Venetian Vision Combi Blinds Chikamu Chikamu Maketeni
Ruvara Ruzivo rweSunscreen Blind Shade Fabric
Zvekushongedza kwemhuri, pane ruzivo rwakadai muvara: kana ruvara rwekushongedza yekurara ruchidziya, zvichave zvinobatsira mukuvandudza kubatana kwemanzwiro emurume nemukadzi; kana chidzidzo chacho chakashongedzwa neruvara rwebhuruu, zvinoita kuti vanhu vatarise pakudzidza nekutsvaga muresitorendi, tafura yekutsva uye tsvuku yekudyira inobatsira kugadzirisa chishuwo. Saka, kuenzanisa kwemavara kwakakosha kwazvo. Kune mibvunzo yakawanda yepuraimari mairi!
China Isina Mvura Keteni Sunscreen Mumvuri Micheka yeRoller Blinds Windows Zvikamu
Hwindo Rinopofumadza Mucheka
Mukuita kwekuvandudzwa kwehupenyu hwehupenyu hwevanhu uye hupenyu hwemweya, machira mavara e roller roller inopofomadza nguva dzose nekupenga kwemashiripiti. Vanhu havangowana chete, kucherechedza, kugadzira, uye kukoshesa iyo yakajeka nyika yemavara, asi zvakare vanoramba vachidzamisa kunzwisisa uye kushandiswa kwemapofu emawindo mavara kuburikidza neshanduko yenguva.
Roller mapofu emicheka machira anoshandisa zvakanaka mavara. Isina mvura roller roller yeakasimba mavara, hemp, gradient, jacquard, uye mamwe akawanda mavara anopfumisa machira emumvuri weChina.
Hwindo Rinopofumadza Screen Sunscreen Zuva Solar Cell Mucheka weRoller Blind
Shutter Window inopofumadza
Zvisikwa zvakakodzerwa nezita remugadziri waro. Nemaara matatu epuraimari, akagadzira zviuru zvemavara, senge yero uye girini muchirimo, ane mavara muzhizha, mapuru matsvuku mumatsutso uye sirivheri muchando. Ruvara roga roga rune runako rwakasiyana. Kana zvabatanidzwa pamwe chete, zvinoonekwa zvinozowedzerwa nehafu yekuedza. Yakawanda zvakadii iwe yaunyanzvi hunyanzvi hwekufananidza hunyanzvi hwemhando dzakasiyana dzeanopfekedza zvipfeko zvitaera? Nhasi, Groupeve iri kuzotaura nezvazvo!
Grey Chinyorwa Kurarama Kamuri 25mm Vinyl Venetian Korea Shutter Window Roller Bofu
Mhando huru dzemapofu mazuva ano
Kurembera maketeni ekudzivirira zuva uye kupisa kupisa inzira inowanzo shandiswa yechinyakare nzira. Kune mhando dzakawanda dzemaketeni, uye imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira maererano neshuwa yezuva uye kupisa kupisa. Izvo zvakanaka kusarudza makobvu, akasviba maketeni ane zuva proof coatings uye zvishandiso.
Mucheka keteni. Iyo yakasviba uye yakasviba iyo ruvara, zvirinani iyo shading uye kupisa kuputira maitiro, nepo yakachena donje uye hemp zvinhu zviri kuwedzera kufema. Unogona kusarudza zvinhu zvine UV kudzivirirwa. Kana iwe usiri kuda kuchinja iyo yekutanga keteni, iwe unogona kuwedzera imwe neta yemumvuri wejira pakati pejira rejira uye gauze keteni.